खतरामा इमरानको कुर्सी ! « Sansar News
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार २२:०५
काठमाडौं । खुफिया एजेन्सी आइ.एस.आइ.का नयाँ चीफको नियुक्तीको विषयले पाकिस्तानको सत्तामा ठूलो तरंग निम्त्याएको छ । नयाँ चीफको नियुक्तीको विषयमा प्रधानमन्त्री इमरान खान र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवाबीच विवाद सिर्जना भएसँगै तरंग निम्तिएको हो ।
आर्मी चीफ बाजवाले आइ.एस.आइ.का नयाँ चीफको नियुक्ती गरेको ९ दिन पछि प्रधानमन्त्री खानले उक्त नियुक्तीमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले बताएअनुसार बढ्दो विवादले सत्ताको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने खतरासमेत निम्तिएको छ ।
बताइएअनुसार आइ.एस.आइ. चीफ नियुक्तीको विवादकै बीचबाट पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहारको खोजीसमेत हुन थालेको छ ।
चर्चामा विदेशमन्त्री कुरैशी
पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार आइ.एस.आइ.का नयाँ चीफको नियुक्तीको विषयमा विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशी आर्मी चीफसँग सहमत छन् । जुन विषयलाई नै लिएर नेतृत्वमा कुरैशीको सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरुले पनि कुरैशीलाई घेरेरै आइ.एस.आइ. नयाँ चीफको नियुक्तीको विषयमा धेरै प्रश्नहरु तेर्साएका थिए । जसमा सञ्चारकर्मीले ‘के तपाईँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै हो ?’ भनिसमेत प्रश्न गरेका थिए । जसमा कुरैशीको जवाफ पनि निकै गम्भीर र कुटनैतिक प्रकारको थियो । उनले प्रधानमन्त्री खानप्रति संकेत गर्दै ‘केही चाहनाहरु चाहनामै रहने’ बताएका थिए ।
पाकिस्तानको सत्ताको नेतृत्वमा को हुने भन्ने विषय जनमतभन्दा बढी पाकिस्तानी सेनाको समर्थन कोसँग छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । अहिले आइ.एस.आइ.का नयाँ चीफको नियुक्तीको विषयमा सेनासँग विदेशमन्त्री कुरैशी नजिक देखिएका छन् । उनले सेनाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् ।
पाकिस्तानका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ।
कुरैशी र सेनाबीच गहिरो सम्बन्ध
आफ्नो पक्षमा बोल्ने कुरैशीलाई सेनाले पनि आफ्नो नजिकको रुपमा मान्दै आएको छ । सत्तारुढ पार्टी मात्रै होइन् विपक्षीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाएका कारण कुरैशीको सम्भावना बढेको हो । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेअनुसार सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार हुने कुरैशीको स्वभावले पनि यसपटक काम गरेको छ ।
यसअघि कुरैशी बेनजीर भुट्टो नेतृत्वको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीमा थिए । तत्कालिन समयसमेत उनलाई पार्टीको नेता भन्दा सेनाको नजिकको व्यक्ति भनेर चित्रित गरिएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा